Ity lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Fomba iray-Mars diany: Nofantenana dia ahitana fito Aostraliana” nosoratan'i Michael Safi, fa theguardian.com tamin'ny Talata faha-17 Febroary 2015 06.18 UTC
Aostraliana fito no nanao Nofantenana ny 100 kandidà mifaninana ho iray-lalana nankany Mars mba hampiorina ny mena ny voalohany tany zanatany.
Sivy ambin'ny folo taona Teah, mijoro-up mpanao hatsikana Josh Richards sy geoscientist Electra Navarone teo amin'ny Aostraliana finalists ho an'ny tetikasa iray Mars, izay mikendry ny hanomboka handaminana ny fahefatra planeta avy amin'ny masoandro avy 2025.
Sivy ambin'ny folo taona no såre Teah nanao ny Nofantenana. Sary: Mars iray
Ny tetikasa, hanorina ny holandey mpandraharaha Bad Lansdorp, mihambo ho manana nandray kokoa noho ny 200,000 fampiharana avy budding Martians, ary milaza izany dia whittling ny lisitra nidina ho any 50 ny lehilahy sy ny 50 vehivavy.
Nosafidiana ny kandidà avy amin'ny "ny fahalalana ny loza mety hitranga anjara, ekipa fanahy sy ny antony manosika mba ho anisan'ny manova fiainana ity iraka,"Araka ny fanambarana.
Ny tetikasa ara-pitsaboana lehibe indrindra mpiandraikitra, Norbert Clark, hoy fifidianana fihodinana manaraka dia hifantoka amin'ny fananganana ekipa mahery izay no hahasakana ny fitokana-monina ny interplanetary ponenana.
"Ny maha iray amin'ireo tsara indrindra kandidà tsirairay dia tsy mandeha ho azy ny lehibe indrindra ho anao ekipa mpilalao, ka andriko ny hahita ny fomba kandidà Mandroso ary miara-miasa ao amin'ny atsy ho atsy olana,"Hoy Clark.
Toerana no efa scouted Fa eto an-tany trano fiofanana. Ny lisitry ny 100 kandidà ho tapaka ny afovoan'ny amin'ny taona ho marina 24, izay halefa any Mars amin'ny vondrona efatra isan- 26 volana manomboka amin'ny 2024.
Izany no tanjona, ihany. Mars iray nisoratra Lockheed Martin ny volana Desambra mba hanorina zanabolana mba hametraka an-lalana rehefa manodidina Mars amin'ny 2018. Fa manan-danja ny olana ara-teknika - toy ny fomba-tanety ny nisian'ny asa tanana soa aman-tsara ny Martian ambonin'ny, sy ny fomba hampihenana ny fiantraikan'ny taratra lalina-toerana ny mpanamory - mbola tsy voavaha.
Ny tetikasa dia mitaky ihany koa, fara fahakeliny, $ 7.7bn mba hiala ny tany, izay mikendry ny hanangana ny ankamaroany alalan'ny fivarotana fanohanana sy ny zo ho amin'ny zava-misy momba ny seho TV tetikasa. An Indiegogo fampielezan-kevitra amin'ny 2013-14 atsangana mihoatra noho ny $400,000. Total fanomezana toy ny tamin'ny Novambra Nahatratra ny momba ny $630,000.
Independent fanadihadiana siantifika dia soso-kevitra fa, mifanohitra amin'ny Mars ny filazana iray, fanohanana ny fiainana amin'ny planeta mena dia mitaky "teknolojia izay Mahavita be mihoatra noho ny amin'izao fotoana izao ny toe-kanto".
Mikasa ny maniry voly tao ny zanatany, toerana ahitana capsules sy ny toeram-ponenana inflatable, mety tena hitondra any amin'ny manempotra oversupply ny oksizenina, Hoy ny mpikaroka, mialoha ny mpanamory sambon-danitra voalohany ho faty rehefa avy 68 andro.
Fa ny finalists, anisan'izany Dianne McGrath avy any Melbourne, Tsy perturbed. "Na ny olona mihevitra fa mandeha ho Mars iray, na ny NASA, na fandaharana hafa, dia any Mars, fa ny fandaharam-potoana ho amin'ny fitrandrahana habakabaka,"Nilaza Channel folo ny The Project.
"Izany no anisan'ny fanahy ny olombelona, hanohy ny hijery. Tsara vintana fotsiny aho mba ho anjara izany. "